बेलायती पर्यटकले पुष्कर शाहलाई ठमेलमा हिंडिरहेको देखेपछि - ब्लग - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
मोहन बराल मुन टेक्सास असोज २३
पूरै बडीगार्ड सहित होलान भन्ठानेका शाह एक्लै लखर लखर हिंडिरहेका भेटिए। त्यसैले उनलाई विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाह यिनै हुन भनेर पत्याउन गाह्रो परिरहेको थियो।
लन्डनदेखि साइकलमा दुर्इ वर्ष लगाएर काठमाडौं आइपुगेका बेलायती पर्यटक २०१४ को जुलाईमा विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाह ठमेलमा हिंडिरहेको देखेर चकित भए। हुन पनि उनको देशमा भएको भए शाह जस्ता ‘संसार जित्ने’ व्यक्ति राष्ट्रको सम्पति कहलिने थिए। राज्यले सम्मान र सदुपयोग गर्ने थियो।
नेपाल त उनी घुम्न आएको देश न पर्यो। उनले जे कल्पना गरेर लण्डनबाट नेपाल आएका थिए, त्यसको विपरित अवस्था पाए। पूरै बडीगार्ड सहित होलान भन्ठानेका शाह एक्लै लखर लखर हिंडिरहेका भेटिए। त्यसैले उनलाई विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाह यिनै हुन भनेर पत्याउन नै गाह्रो परिरहेको थियो।
चार बर्ष अधिको यो विषय ती बेलायती यात्रीले त्यही बेला सामाजिक संजालतिर पोखेका थिए। पुष्कर शाहले साइकलको पांग्रामाथि जीवन र मातृभूमीको झण्डा सहित १५० देश पुगेर ‘बुद्ध जन्मेको देश र सगरमाथाको देश’ भनेर नेपाल चिनाए। साइकलबाट विश्वको साढे पाँच फन्को मात्र लगाएनन् धेरै देशको झन्डा बोकेर सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरी अर्को विश्व रेकर्ड तोके। वास्तवमा पुष्कर शाह नेपाली युवाहरूका मात्रै हैन अरू देशका साइकल यात्रीहरूका पनि आइकन हुन्।
नेपालको झण्डा सहित विश्वका १५० देश घुम्दा कतिपय देशका सरकार प्रमुखदेखि नगर प्रमुखसम्म भेटे। न्युजिल्याण्डमा साइकल चोरी भएपछि पहिलो सगरमाथा आरोही एडमण्ड हिलारीले किनिदिएको अर्को साइकलमा बाँकी यात्रा तय गरे।
आज देशका राज्य संचालकहरूले न्युयोर्कका मेयरदेखि बेलायतका महारानी एलिजाबेथसम्मलाई भेटेका शाहलाई चिन्छन् त?
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा गोली खाएर ‘ज्यूँदो सहिद’ बनेका शाहले सायद राजनीतिक पार्टीको झण्डा नबोकेको कारण विश्व भ्रमणबाट हासिल गरेको ज्ञान र अनुभवलाई राज्यले न देख्यो, न त सुन्यो। देश निर्माणमा यस्तो अनुभव प्रयोग हुने कुरा त झन टाढाकै विषय भयो।
वास्तवमा देशले उनको साइकल, उनी पुगेका देशका झण्डा, बिभिन्न देशका सिक्का र चिनो, घुमेका देशका तस्बिर, पत्रपत्रिकामा आएका समाचार कटिङ र सगरमाथा चढ्दा प्रयोग गरेका औजारहरूको महत्व नै नबुझेको देखियो। पुष्करले चाहेमा उनले संकलन गरेका सामान लाखौं डलरमा लिलाम हुन सक्छन्। राज्यले श्रीसम्पत्ति जोडिदेओस् भन्ने उनले चाहेका छैनन्। न त तक्मै तक्माको माला नै चाहेका छन्।
दिनभर हलो जोतेर घर फर्किएको गोरु जस्तै हुन् पुष्कर। गोरूको किसानसँग के आश हुन्छ भने गोठमा बाँधिए पनि घाँस हालिदिए हुन्थ्यो, मैले किसानकै लागि अरू खेतबारी पनि जोत्ने थिएँ। पुष्करको मामिलामा राज्य र पर्यटनसँग सम्बन्धित निकायहरु चुकेका छन्।
लाग्छ नेपालमा राज्य व्यवस्था मात्रै परिवर्तन भएको छ। स्थिति पहिले भन्दा पनि बिकराल छ। समाज राजनीतिको नाममा बिभाजित हुँदैछ। संवेदना र मानवता हराउँदै गइरहेको छ। राज्य संचालकहरुलाई नागरिक भनेका पार्टीका झण्डावाल कार्यकर्ता हुन भन्ने भ्रम छ। पार्टीको झण्डा नबोक्नु ठूलो अपराध गर्नु सरह बन्दै गएको छ।
यस्तो अवस्थामा देशको झण्डा बोक्नेहरुबारे कसले सोचिदिने? केही पर्दा कसले सहयोग गरिदिने? महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकाटाले ‘के नेपाल सानो छ?’ शीर्षक सुप्रसिद्ध निबन्धमा लेखेका छन्– यहाँ वाग्नर कोदाली खनिरहेछन्। शेक्सपियर हलो जोतिरहेछन्। टिसियन र टर्नर भेडा चराउँदा हुन्। सोक्रेटिज गुफामा घोत्लिरहेका होलान्। कालिदास आषाढको पन्ध्रमा धाराप्रवाह गीत गाइरहेका होलान्। मकहाँ साण्डोले दाउराका भारी बोकेर ल्याउँछन्। मेरो वनमा हेलेन केलरहरु गीत गाउँछन्। यहाँ कति सावित्रीहरु छन्, जसका कथा संसारले सुनेकै छैन। यहाँ कति साहित्य छ, जो लेखिएकै छैन, न लेखिनेछ।
अहिले देवकोटाले भनेको जस्तो कहाँ छ र?
देवकोटाले भनेका वाग्नर, शेक्सपियर, टिसियन, टर्नर, सोक्रेटिज, कालीदास, साण्डो, हेलेन केलर र सावित्रीहरूलाई राज्यले ‘जीन्दगी निर्वाह गर’ भनेर एकथान पासपोर्ट दिएको छ। राज्यको अर्थतन्त्र चलाइदिने ती कतिपय अहिले साउदी अरब, कतार लगायतका खाडी राष्ट्रमा पसिना पगाइरहेका छन् त कोही यूरोप र अमेरिकातिर छन्। अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउने युवा जो खाडी राष्ट्रमा गएका छन्, उनीहरू कतिपय काठको बाकसमा फर्कनु पर्ने पीडा छ।
आमाको कोख नजन्मने बेलासम्मको बास भएको छ भने मरन हुने कहाँ हो कसैलाई थाहा छैन। जन्मेका सन्तानलाई कुन देश पठाउने भन्ने चिन्ताले आमा बालाई सन्तान नजन्मँदैदेखि थिच्न थालेको छ। यो हाम्रो वर्तमानको बिडम्बना हो।
प्रकाशित २३ असोज २०७५, मंगलबार | 2018-10-09 15:19:29
मोहन बराल मुन टेक्सास, अमेरिकामा बस्छन्
मोहन बराल मुनबाट थप